Shariif Xasan oo isku Shaandhayn ku sameeyay ciidamada madaxtooyada KGS • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Shariif Xasan oo isku Shaandhayn ku sameeyay ciidamada madaxtooyada KGS
Shariif Xasan oo isku Shaandhayn ku sameeyay ciidamada madaxtooyada KGS
October 30, 2018 - By: Mjama
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isbedel ku sameeyay saraakiisha iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed.
Kulan gaar ah oo xalay Shariif Xasan iyo la taliyeyaashiisa dhinaca ammaanka ku dhexmaray madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu go’aamiyay arrintan isku shaandaynta ah.
Saraakiishii iyo ciidamadii ilaalada ka hayay madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa la isugu geeyay xero ku taalla gudaha magaalada Baydhabo, islamarkaana ciidan cusub oo ku dhaw Shariif Xasan ayaa la keenay madaxtooyada KGS.
Arrintan ayaa waxaa sababay kadib markii ciidankan ay ka soo horjeesteen siyaasadda Shariif Xasan, islamarkaana taageero u muujiyeen musharaxiinta kale taas oo khatar weyn ku noqonaysay amaanka madaxweynaha.
Shariif Xasan oo ah nin aad u siyaasad badan ayaa aaminsan in wax walba ay dhici karaan inta yar ee ka harsan doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo la qorsheynayo inay dhacdo 17-ka bisha soo socota amaankuna muhiimadiisa leeyahay .